Izindaba - Ngonyaka odlule, kwathunyelwa i-11.0 GWH yamabhethri e-lithium omhlaba wonke yamathuluzi kagesi, ama-80% awo asetshenziswa ezimbonini zaseChina
Ibhethri leLithium lithole ukubuyiselwa kwebhethri le-nickel cadmium bese kuba yi-nickel hydrogen battery. Ngokombono wesikali semakethe, isilinganiso semakethe yomhlaba wonke se-lithium battery yamathuluzi kagesi sizofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-9.310 ngonyaka wezi-2019, futhi isikali semakethe sebhethri le-lithium lamathuluzi kagesi eChina sizofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7.488.
Muva nje, i-evtank, isikhungo socwaningo, ngokuhlanganyela ikhiphe iphepha elimhlophe mayelana nokuthuthukiswa komkhakha wamathuluzi kagesi waseChina (2020) ngokubambisana ne-Ivey Economic Research Institute. Ephepheni elimhlophe, i-evtank yenze ucwaningo oluningiliziwe kanye ne-Analysis kumthamo wokuthunyelwa, isikali semakethe, iphethini lokuncintisana lamabhizinisi wamathuluzi kagesi, isimo sokuthekelisa amabhizinisi wamathuluzi kagesi, nemibandela yebhethri yamathuluzi kagesi, futhi yenza ucwaningo oluningiliziwe ne-Analysis ku imikhiqizo emikhulu yasekhaya Ukuhlaziywa kokulinganisa kwebhizinisi lamathuluzi kagesi kuyenziwa.
Ngokusho kwephepha elimhlophe elikhishwe yi-Ivey Economic Research Institute, ngokwakhiwa kwamathuluzi kagesi angenazintambo, inani lamaseli adingekayo kuthuluzi elilodwa likagesi nalo liyanda, futhi ukuthunyelwa kwamabhethri e-lithium amathuluzi kagesi bekhule ngokushesha. Ku-2019, ukuthunyelwa kwebhethri le-lithium emhlabeni jikelele kwamathuluzi kagesi kuzofinyelela ku-11.0gwh, ngokukhula konyaka ngonyaka ngama-25.0%, futhi isidingo samabhethri e-lithium emakethe yamathuluzi kagesi aseChina ngu-8.8gwh, unyaka nonyaka ukwanda ngama-25.7%.
Ngokusho kwephepha elimhlophe, amabhethri e-lithium abhekane nokushintshwa kwamabhethri e-nickel cadmium abese efaka amabhethri e-nickel hydrogen. Ngokwesilinganiso semakethe, isilinganiso semakethe yomhlaba wonke yamabhethri e-lithium amathuluzi kagesi azofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-9.310 ngonyaka wezi-2019, futhi isilinganiso semakethe yamabhethri e-lithium yamathuluzi kagesi eChina sizofinyelela kuma-yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-7.488.
UWu Hui, umphathi jikelele woMnyango Wezocwaningo we-Ivey Economic Research Institute, uthe amabhethri e-lithium amathuluzi kagesi adinga ukusebenza kwezinga, ngakho-ke umkhawulo wabo uphakeme kunamabhethri ohlobo lwamandla ajwayelekile. Isikhathi eside, amabhethri wamathuluzi kagesi emhlabeni abephethwe yi-Samsung SDI, iPanasonic, iMurata, i-LG nezinye izinkampani zamabhethri aseJapan naseNingizimu Korea. Kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje, amabhizinisi amaShayina afana neYiwei lithium energy, iTianpeng, haisida namanye amabhizinisi aseqalile ukuba ngobuningi Isabelo semakethe yamabhizinisi ebhethri asekhaya ngezinga eliphakeme ibhethri le-lithium lamathuluzi kagesi emhlabeni liyanda kancane kancane.
UWu Hui uthe okwamanje, amabhethri amakhulu amathuluzi kagesi yi-cylindrical 1.5Ah ne-2.0ah. Izinkampani zamabhethri aphesheya kwezilwandle sezivele zinikeze amabhethri amathuluzi angu-2.5ah ngobuningi bawo. Izinkampani zamabhethri zaseChina ezifana neYiwei lithium energy nazo zizophakela amabhethri angu-2,5ah ngonyaka wezi-2020. Kubalulekile ukuphawula ukuthi i-ATL namanye amabhizinisi amabhethri athambile nawo azama ukusebenzisa amaseli ephakheji athambile emkhakheni wamathuluzi kagesi.
Ephepheni elimhlophe mayelana nokuthuthukiswa komkhakha wamathuluzi kagesi waseChina (2020), i-Ivey Economic Research Institute yenze ukuhlaziywa okuningiliziwe ngezimfanelo eziyisisekelo nochungechunge lwezimboni lwamathuluzi kagesi, ivolumu yokuthunyelwa komhlaba wonke kanye nesikali semakethe yezinhlobo ezahlukene zamathuluzi kagesi, Izinhlobo ezahlukene zamathuluzi kagesi okuthunyelwa nosayizi wemakethe, amaphethini wokuncintisana wesifunda nowamabhizinisi wemboni yamathuluzi kagesi, kanye nesimo sokuthekelisa nesimo sokuthekelisa somkhakha wamathuluzi kagesi Inani lokuthekelisa kanye nezifunda, imikhiqizo nesimo sebhizinisi sethuluzi lamandla lokhiye amabhizinisi, kanye nesimo sebhizinisi lamathuluzi amakhulu wamathuluzi abahlinzeki bebhethri ahlaziywa ngokuningiliziwe, futhi imboni yamathuluzi kagesi eminyakeni emihlanu ezayo ihlolisisiwe futhi ibikezelwe.
Isikhathi Iposi: Sep-11-2020
12v Lithium Ion Ibhethri elishajekayo, 18650 uNimh, Li Ibhethri, Iphakethe Lithium Battery Pack eyi-12 Volt, I-Lithium Ion Polymer Ibhethri, 3.7 Ibhethri elishajekayo, Yonke Imikhiqizo